Hotline Khabar | News Website दशैंमा घुम्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? नछुटाउनुस् यी १० ठाउँ – Hotline Khabar
दशैंमा घुम्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? नछुटाउनुस् यी १० ठाउँ
७ आश्विन, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ७ असोज । नेपालीहरुको महान चाड दशैंले छपक्कै छोपी सक्यो । विदेशमा भएका र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आफन्तहरु घर जाने तरखरमा छन् ।
उनीहरु गाडी वा प्लेनबाट घर जाने जोहो गर्दैछन् । तर, कोही–कोहीले दशैंको छुट्टीमा घुम्न जाने योजना पनि बनाउँछन् । व्यस्त दैनिकीबाट आक्रान्त बनेका मान्छेहरु नयाँ स्थानमा घुमफिर गर्दै रमाइलोसँग मनाउने योजनामा हुन्छन् ।
उनीहरुले नेपालमै रहेका महत्वपूर्ण ठाउँहरुकाबारे जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले यसपालीको दशैंमा घुम्न जाने तयारी भएका मानिसहरुलाई केही नयाँ ठाउँको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं ।
त्यसो भए कहाँ गएर दशेंमा रमाइलो गर्ने त यी हुन नेपालका चर्चित १० स्थान जसले तपाईको दशैं रमाइलो बनाइदिन सक्छ ।
नेपालको मध्यभागमा अवस्थित अत्यन्त सुन्दर नगरी पोखरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । पोखरालाई पर्यटकहरुका लागि निकै उपयुक्त गन्तव्यको रुपमा लिइन्छ । यहाँ बर्सेनि लाखौंको संख्यामा पर्यटकहरु आउने गर्छन् । पोखराको मुटुमा अवस्थित फेवाताल र फेवातामा देखिने माछापुच्छ«े हिमालको छायाले जोकोहीको मन लोभ्याउने गर्छ ।
रुपाताल, बेगनास ताल, चमेरे गुफा, डेभिड फल्स, गुप्तेश्वर महादेवलगायत पोखराका घुम्न लायक ठाउँ हुन् । प्याराग्लाइडिङ पोखराका लागि पर्यटक भित्र्याउने अर्को माध्यम हो । प्याराग्लाइडिङमा रम्नकै लागि यहाँ थुप्रै पर्यटक आउने गर्छन् । काठमाडौंबाट सडक दुरीमा पनि नजिक रहेको पोखराले व्यस्त दैनिकीबाट थकित हुनेहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्छ ।
चितवनको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सौराहा हो । साहसिक पर्यटन र वाइल्ड लाइफप्रति रुचि राख्ने पर्यटकका लागि सौराहा प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा हात्ती र जीप सफारी गर्नका लागि पनि यो ठाउँ प्रसिद्ध छ ।
सौराहाको जंगलमा नेपालमा मात्र पाइने एकसिङ गैंडासँगै विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी र जनावर पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । पशुपक्षी प्रेमीहरुका लागि यो ठाउँ अत्यन्तै रमणीय छ । साथै नारायणी नदि किनारमा रहेका होटलहरु पनि मनोरञ्जनका मुख्य आकर्षक हुन् ।
कर्णाली भन्नेबित्तिकै तपाईंको पहिलो रोजाइ रारा ताल हुन सक्छ । उसो त मौसमका हिसाबले पनि रारा पुग्नका लागि उपयुक्त समय हो यो । रारा प्राकृतिक सुन्दरताले सजिएको एक मनमोहक ताल हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल रारा १०.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
समुद्री सतहबाट १० हजार फिट उचाइमा रारा ताल छ । ताल वरिपरि घुम्न ट्रेकिङ रुट छ । सफा पानीमा स्नो ट्राउट माछा, हाँस, जलेवाजस्ता चरा डुबुल्की मारेको दृश्यले राराको वातावरण नै भिन्न देखिन्छ ।
राराबाट फर्किएपछि तपाईंले जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका घुम्न सक्नुहुन्छ । जुन नेपाली भाषाको उद्गमस्थल र सिञ्जा राज्यले परिचित क्षेत्र हो ।
पैदल यात्रा र प्रकृतिसँग रमाउन चहानेका लागि डोल्पामा अवस्थित से–फोक्सुन्डो ताल उपयुक्त गन्तव्य हो । ट्रेकिङमा रुचि राख्नेका लागि से–फोक्सुन्डो ताल स्वर्गजस्तै हो ।
उच्च हिमाली भेग, रमणीय फाँटहरु से–फोक्सुन्डो तालमा सधैंका लागि भर्जिन छन् । तर सानो दुःखले डोल्पामा पुग्न सकिँदैन ।
लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । लुम्बिनी बुद्धकै जन्मस्थलको नामबाट नामकरण गरिएको हो । लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको विशेष ऐतिहासिक तीर्थस्थलको नामले विश्वमै चर्चित भएका कारण युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको छ ।
यो विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भ, मायादेवीको मन्दिर, बौद्ध बिहार आदि हेर्नलायक छन् ।
६. लाङटाङ उपत्यका
लाङटाङमा पर्यटकका लागि सुविधा पर्याप्त छन् । साना होटेल र होमस्टको समेत राम्रो सुविधा लाङटाङमा छ ।
अलि चाँडै उकालो लाग्नुभयो भने हिमालबाट शहरतर्फ झारिएका भेँडाबोकाको लस्कर देख्ने मौका मिल्नेछ । यो दृष्य निकै चित्ताकर्षक हुन्छ ।
मुक्तिनाथ जाँदा एक रात कागवेनीमा बिताउनुहोस । तिब्बती सम्भ्यताको नमूना क्षेत्र हो कागबेनी । पुरानो सभ्यताको अवलोकन गर्दा यो पनि नेपालमै छ र ? भन्ने भान पर्छ ।
इलाम चियाका लागि प्रसिद्ध स्थान हो । इलाम पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालको पूर्वी भेगमा अवस्थित इलामका रमणिय वातावरण, डाँडाकाँडा हरियाली चियाबारी, थुम्काथुम्की र बुट्यानहरुले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मनमोहक पार्दछ ।
हरिया चिया बगानका बिचमा अवस्थित चिल्ला सडकमा पैदल हिंड्न तथा गाडिमा शयर गर्नमा बेग्लै आनन्द मिल्दछ । चिया बाहेक छुर्पीको लागि पनि इलाम प्रसिद्ध छ ।
नेपालको मुख्य र सबैभन्दा आकर्षक पदमार्ग घान्द्रुक–घोरेपानी–पुनहिल हो । पुनहिलमा पुगेर दर्जनौ हिमश्रृंखला हेर्न सकिन्छ ।
म्याग्दी जिल्लामा रहेको पुनहिल ३ हजार २ सय १० मिटर उचाइमा रहेको छ । अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रको एउटा मुख्य भागको रूपमा रहेको पुनहिलमा ३० वटा होटल छन् ।
१०. बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिममा क्षेत्रमा रहेको छ । आदिवासी थारु समुदायसँगै दशैं मनाउने मुडमा हुनेहरुका लागि बर्दिया विशेष गन्तव्य हो ।
तपाई यहाँ होमस्टेमा बस्दा सबैभन्दा राम्रो । किनकी थारु समुदायको दशैंलाई अनुभव गर्ने मौका मिल्छ । तराईको फाँटमा धान जुलेको, हरियाली जंगल यी सबै अनुभव एकै यात्रामा प्राप्त हुनेछ ।
बर्दिया यात्राका दौरान चिसापानीको माछा खान नबिर्सनुस् । कर्णालीको आकर्षक पुल अवलोकन सोही समयमा गर्न सकिन्छ । जंगल सफारीमा समेत रमाउन सक्ने सुविधा यहाँ छ । साथै यहाँ नजिकबाट बाघको अवलोकन गर्ने अवसर पनि तपाईलाई मिल्न सक्छ । बर्दिया बसाइँमा थारु समुदायका मौलिक परिकारमा जोड दिनुहोस् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले करिब ९६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । निकुञ्ज नेपालको पश्चिममा कर्णाली नदीको पूर्वतिरको तराई प्रदेशमा अवस्थित छ ।
सन् १९६८ मा शाही शिकार आरक्षको रूपमा स्थापना गरिए पनि सन् १९६७ मा करिब ३६८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको उक्त आरक्षणलाई शाही कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा घोषणा गरियो ।
उक्त क्षेत्रमा जानको लागि हवाई तथा सडक दुवै मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । हवाई मार्गमार्फत जान काठमाडौंबाट नेपालगन्जको उडानमा जानुपर्ने हुन्छ ।
मानव स्वास्थ्यका लागि मुलाको कस्तो महत्व छ ? जान्नुहोस् रोचक तथ्य
औषधिजन्य गुणले भरिपूर्ण तथा बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ मुलाको पातमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन–ए पाइने भएकाले यसको हरियो पातको साग भोजन गर्नाले…
यसरी हुन्छ बच्चाको हड्डी कमजोर
शरीरमा भिटामिन डी, क्याल्सियम र फस्फोरसको कमीका कारण बच्चाको हड्डीमा देखिने समस्या रिकेट्स हो ।
विज्ञले भनेः फेस एप्स प्रयोग नगर्नू !
काठमाडौं, ६ श्रावण । कलाकारदेखि युवापुस्तामाझ ‘फेस एप्स’ नामक एप्स लोकप्रिय भइरहेको छ । उक्त एप्स प्रयोग गर्दै आफ्नो बुढेशकालको…